ကူညီကြပါအုံး — MYSTERY ZILLION
August 2009 edited August 2009 in Ubuntu
ကျွန်တော်က အခုမှ linux ကိုစသုံးတဲ့သူပါ။ ubuntu 9.04 ကိုသုံးနေပါတယ်။ အခု ကျွန်တော့ကွန်ပျူတာထဲကို ဇော်ဂျီယူနီကုတ်ထည့်မရလို့ ဒီဖိုရမ်ထဲက နည်းတွေသုံးတာလဲ သုံးလို့မရဘူး။ .tar.gz ကို Inltall လုပ်တာလဲမရဘူး။ :106:.deb ကို install လုပ်တော့လည်း
(Reading database . . . 103078 files and directories currently installed.)
Unpacking zg-mm3-kb (from .../Desktop/zg-mm3-kb.deb) . . .
dpkg: error processig/home/kawlinkoko/Desktop/zg-mm3-kb.deb (--install):
trying to overwrite ` /user/share/X11/xkb/symbols/mm' , which is also in package xkb-data
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ဒီကအစ်ကိုကြီးတွေ ပြောပြကြပါအုံး။
ကျွန်တော် ubuntu ကို အရမ်းသုံးကြည့်ချင်လို့ပါ။
zawgyi keyboard ရော font အတွက်ပါ အောက်ကလင့်မှာ ရှိပါတယ် ၊၊
နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုက panal ထဲက task bar ကို delete လုပ်မိလိုက်တာ :2: ပြန်ပေါ်မလာတော့ဘူး။ shourcut တွေလဲမသိတော့ ဘာမှလုပ်လို့မရဘဲ ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး သိတဲ့လူရှိရင် ပြောပေးကြပါအုံး။